अब विपद्का सबै सूचना एकै ठाउँबाट … - Dainik Nepal
अब विपद्का सबै सूचना एकै ठाउँबाट …
दैनिक नेपाल २०७६ साउन ७ गते २१:२६
काठमाडौँ, ७ साउन । तपाईँले कुनै पनि बेला हुने विपद्का घटनाको जानकारी पाउन सकस झेल्दै आउनुभएको छ ? अथवा भएका घटनामा जानकारी पाउन सक्नु भएको छैन ? या वर्तमानमा कहाँ के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिन मुस्किल परिरहेको पो छ की !
त्यतिमात्रै होइन, भएका घटनाबारे अहिले के भैरहेको छ, राहत पाएको छ कि छैन, कुन निकायले राहत उपलब्ध गराउँदै छ, कुनै ठाउँमा राहत दोहोरिएको पो छ की ! यस्तैयस्तै समस्या छन् भने अब त्यसबाट तपाईँ मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । यसका लागि तपाईँले एउटै वेब साइट खोले पुग्छ ।
गृह मन्त्रालयले अहिले परीक्षण गरिरहेको ‘एकीकृत सूचना प्रणाली’ अन्तर्गतको धधध।दष्उबम।नयख।लउ लग इन गरे पुग्छ । यसबाट सूचना मात्रै आउने नभई आधिकारिक निकायबाट प्रतिकार्यमा तत्कालै जुट्नसमेत मद्दत गर्नेछ ।
“विपद्का सूचनाहरु एकै ठाउँबाट सबैले जानकारी पाउन सकुन्, हरेक घटनाको व्यवस्थापन र राहत वितरण कार्यसमेत नदोहोरिने गरी काम प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त सूचना प्रणालीको विकास गरिएको हो, यसबाट अहिले तीन तहको सरकारबीच समन्वयमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।” गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार स्रोत, साधन, जनशक्ति, समय र बुद्धीको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकीकृत सूचना प्रणालीको हो ।
गएको असार अन्तिम साताको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो जनधनको क्षति भयो । यसको विवरण प्राप्त गर्न सञ्चारकर्मीलाई होस् या विपद् व्यवस्थापनमा लागेका सरकारी अधिकारीलाई धौधौ प¥यो । कतिपय सरकारी कार्यालयका विवरणसमेत फरक फरक आए ।
अहिलेसम्म पनि क्षतिको यकिन विवरण आउन सकेको छैन । यसरी फरकफरक विवरण नआओस् र समयमै यकिन विवरण आओस् भन्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले उक्त वेब साइट सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
एकीकृत सूचना प्रणाली अहिले परीक्षण कै क्रममा छ । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले विवरण हालेर प्रयोग गरिरहेको छ । छिटै प्रदेश, स्थानीय तह, जिल्ला र विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थालाई समेत युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराएर हरेक क्षेत्रका घटना र भएका उपलब्धिहरु उनीहरुले नै अपलोड गर्न सक्ने गरी वेबसाइटको विकास गरिएको छ ।
घटनाहरुको विवरण तत्कालै स्थानीय क्षेत्रबाटै हाल्न सक्ने र राहत वितरण भए नभएको समेत जानकारी दिन सकिन्छ । “कहाँ कति सामान छ, के के आवश्यक छ भनेर वेबबाटै जानकारी दिन र लिन सकिने गरी उक्त सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरिएको छ, जसले विपद् व्यवस्थापनसँगै क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ”, खनालले थप्नुभयो । उहाँले सबै निकायसँगको समन्वय गर्ने कडी नै वेब हुने बताउनुभयो ।
उक्त धधध।दष्उबम।नयख।लउ खोल्ने वित्तिकै ड्यासबोर्ड खुल्छ । दायाँतर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रदेश भनेर लोकेशन फिल्टर गर्न सकिनेछ । बायाँतर्फ साइटमा विपद् अप्सनमा गएर विवरणहरु लिन सकिन्छ ।
त्यसपछि विभिन्न अप्सनहरु आउँछन् । आवश्यकता अनुसारको अप्सनमा क्लिक गरे पनि विवरणहरु थाहा पाउन सकिन्छ । यसले सूचना चाँडो र एकीकृत रुपमा ल्याउन सहयोग गर्नेछ । मुख्यगरी साइटको सबैभन्दा दाहिनेपट्टी छ वटा मुख्य अप्सनबाट धेरै कुराहरु थाहा पाउन सकिन्छ । यहाँ देश र प्रदेशको नक्सासहित जानकारी पाउन सकिन्छ ।
यहाँ इन्सिडेन्ट, ड्यामेज एण्ड लस, रियल टाइम, प्रोफाइल, रिस्क इन्फोलगायत अप्सन छ । इन्सिडेन्टमा क्लिक गरेपछि नेपालमा भएका घटना देख्न सकिन्छ । यसमा सयौँ वर्ष अघिदेखिका घटना फेला पार्न सकिन्छ । दिन, हप्ता, महिना, वर्षमा भएका विपद्का घटनाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने वेब साइट निर्माण गर्ने संस्था युथ इनोभेशन ल्याब काठमाडौँका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
आज अपराह्नको विवरणअनुसार गएको एक महिनामा नेपालमा ५०६ वटा विपद्का घटना भएका छन् । जसमा १०० जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोका १७७, बाढीका ११६, आगलागीका १०६, चट्याङका ४१ वटा घटना भएको अभिलेख छ ।
सोही अभिलेखमा सन् २०११ देखि अहिलेसम्म १८ हजार ४२० घटनामा १० हजार ६३० जनाको मृत्यु भएको खतिवडाले साइटको विवरणबारे बताउनुभयो । “यसलाई कसरी सजिलो तरिकाबाट चलाउने भन्नेमा हामी लागेका छौँ, साइटको काम भने सबै सम्पन्न भैसक्यो”, खतिवडाले भन्नुभयो ।
यसलाई छ महिना अघिदेखि बनाउन थालिएको हो । युथ इनोभेशन ल्याबले ३० जना इञ्जिनियरको सहयोगमा निर्माण गरेको उक्त साइट परीक्षण प्रयोगमा आइसकेको छ । अब प्रचारप्रसारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिन बाँकी नै छ । सबै क्षेत्रमा जानकारी पुगेपछि भने प्रभावकारी हुने आशा राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।